Elon Musk: "Raha tsy afaka mamaha ny olan'ny angovo any Aostralia ao anatin'ny 100 andro aho dia hataoko maimaim-poana" | Fanavaozana maintso
Elon Musk dia tia fanamby lehibe, ary raha miaraka amin'izy ireo dia afaka manome laza malaza an'ireo orinasany samihafa izy, vao mainka tsara kokoa. Ny mpanorina Tesla, dia nilaza fa afaka hamaha ireo olan'ny angovo any Aostralia atsimo. Ary toy ny amin'ny tolotra teleshopping tsara indrindra, nomeny toky fa raha tsy vitany izany ao anatin'ny 100 andro dia hataony tanteraka maimaim-poana.
Araka ny voalaza The Guardian, ny volavolan-keviny dia toa naniry fatratra sy matanjaka ampy handresena lahatra an'i Mike Cannon-Brookes, mpiara-manorina an'i Atlassian aostralianina, fa Nanontaniako izy hoe nanao ahoana ny fahamatorany taminy. Farany ary rehefa avy nanome ny vaovao fa raha tsy azony izany ao anatin'ny zato andro dia hataony maimaimpoana izany dia nilaza tamin'i Can i Cannon-Brookes mba hiandry herinandro mba hiezahany hamaha ny olana ara-politika sy ara-bola ary hiresaka izy ireo .
Tafatsoka ao australia atsimo a krizy angovo lehibe, ary toa tsy dia maika hamaha azy ny governemanta federaly sy ny fanjakana. Nijaly fahatapahana izy ireo nanomboka ny volana septambra lasa teo, izay miteraka ady ara-politika mitombo izay anomezan'ny governemanta federaly ny angovo azo havaozina amin'ireo aretina rehetra. Ny mpandraharaha tsena angovo aostralianina raha manome toky fa anton-javatra maro ireo fahatapahan-jiro ireo, toy ny fitakiana angovo avo tsy ampoizina.
1 Tesla hamonjy
@mcannonbrookes Tesla dia hametraka ny rafitra ary hiasa 100 andro amin'ny sonia fifanarahana na maimaim-poana. Tena matotra ho anao ve izany?
- Elon Musk (@elonmusk) Diaben'ny 10 tamin'ny 2017
Manohitra an'io toe-javatra io, ny Tesla VP an'ny vokatra angovo, Lyndon Rive, nanambara ny alakamisy lasa teo tao amin'ny Australian Financial Review fa ny orinasany dia afaka mamaha ny olan'ny angovo avy any Aostralia atsimo afaka zato andro raha nanontany izy ireo noho ny haingam-pamokarana azony tratrarina miaraka amin'ny Nevada Gigafactory azy ireo. Raha ny marina dia nilaza izy fa afaka manolo-tena amin'ny fametrahana batterie ilaina 100-300 megawatt-ora ilaina.
Raha jerena ireo fanambarana ireo dia nanontany an'i Rive sy Elon Musk tao amin'ny Twitter ny mpiara-manorina Attlasianina Mike Cannon-Brookes tao amin'ny Twitter hoe hatraiza ny fahamatoran'izy ireo amin'ity tolokevitra ity. Ny valintenin'i Musk dia hoe matotra tokoa raha tsy manana ny rafitra napetraka izy ireo ary miasa ao anatin'ny 100 andro manomboka amin'ny fanaovan-tsonia ny fifanarahana dia hataon'izy ireo maimaim-poana izany rehetra izany. "Tena ampy ho anao ve io?" Hoy i Musk nivazivazy.
@mcannonbrookes 250 $ / kWh amin'ny haavo fonosana ho an'ny rafitra 100MWh +. Tesla dia mifindra amin'ny vidiny mihidy sy misokatra ary ny teny ho an'ny vokatra rehetra.
Ny valintenin'i Canon-Brokes dia nitaky herim-po mahery vaika ihany, nangataka azy hanome azy ny vidim-bidy eo ho eo, ary milaza azy hiandry herinandro mandritra ny fotoana niezaka ny handray ny dingana politika sy tetibola ilaina mba hahafahan'i Tesla manandrana mamaly ny fanambiny. Raha nahomby, Tesla dia mety hahazo ny fifanarahana manaraka noho ny filokana rehetra na tsy misy amin'ny tambajotra sosialy.
Tesla dia tsy manana batterie 300 MWh vonona, izay ny fahaiza-manao faratampony nolazain'i Rive, fa ny filoha lefitry ny orinasa dia manantena ny hanana azy ireo vonona amin'ny fe-potoana nomena raha nanapa-kevitra ny hitoky amin'izy ireo izy ireo amin'ny farany. Ny fanamby farany natokana ho an'ny orinasan'i Musk dia ny fametrahana toeram-pambolena batterie 80 MWh any South California ao anatin'ny 90 andro monja amin'ny vidiny $ 100 tapitrisa.
Ireo fihetsika ireo dia tena mifanaraka amin'ny eritreritr'i Elon Musk, mpandraharaha nanolo-tena hampiroborobo ny angovo azo havaozina ary ahazoam-bola amin'ny tetikasa manampy ny hafaManomboka amin'ny famahana ny olan'ny fifamoivoizana amin'ny alàlan'ny fananganana tonelina (HyperLoop) ka hatramin'ny famerenana ny olona amin'ny volana (SpaceX). Mbola ho hita eo raha matoky an'i Tesla ihany ny governemanta Aostraliana ary raha mitana ny teniny izy ireo na tsia.
Hyperloop dia ny anarana varotra nosoratan'ny orinasam-pitaterana aerospace SpaceX, ho an'ny fitaterana mpandeha sy entana ao anaty fantsom-pahitalavitra haingana be.
SpaceX dia natsangan'i Elon Musk tamin'ny volana jona 2002 mba hanavaozana ny haitao amin'ny habakabaka, miaraka amin'ny tanjona faratampony avelao ny olona honina amin'ny planeta hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Elon Musk: "Raha tsy afaka mamaha ny olan'ny angovo any Aostralia ao anatin'ny 100 andro aho dia hataoko maimaim-poana"
isaac van rysselberghe dia hoy izy:
rehefa navoaka ity vaovao ity
Valio isaac van rysselberghe